मनिषा जसले बीबीएसमा नेपाल टप गरिन् – Sandesh Press
August 7, 2021 183
उनले बीबीएम संकायको पाँचौं सेमेष्टरमा ३.९ सिजिपिए प्राप्त गर्दै नेपाल प्रथम भएकी हुन् । त्यस्तै मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसकै प्रजिता सुवेदीले ३.८८ सिजिपिए सहित नेपाल द्वितीय भएकी हुन् ।मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका बीबीएम संकायको पाँचौं सेमेष्टरका सबै विद्यार्थी प्रथम श्रेणीका साथ शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएको छ ।
उता जनकपुरको श्री माध्यमिक विद्यालयबाट एसइईमा ३.७ जिपिए ल्याएपछि आशिक झा पढ्न काठमाडौं छिरे। उनले नाम चलेको सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने अठोटसहित विज्ञान र ए लेभलको प्रवेश परीक्षा दिए। सेन्ट जेभियर्समा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिनेको लाइन हरेक वर्ष एक किलोमिटरभन्दा लामो हुने गर्छ।
जहाँ एक से एक स्कुल पढेका विद्यार्थीबीच प्रवेश परीक्षामै कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनकपुरको सामान्य सरकारी स्कुलमा पढेका आशिकले त्यही चुनौतीबीच सेन्ट जेभियर्समा नाम निकाले। तर नाम निकालेको खुशी लामो समय टिक्न सकेन। कलेजले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ मागेपछि उनी निराश भए।
‘म सामान्य परिवारको मान्छे हुँ। बुबाआमा खेती किसानी गर्नुहुन्छ’ आशिकले भने, ‘त्यति धेरै खर्च गरेर पढाउने मेरो परिवारको क्षमता थिएन। त्यसैले नाम निकाले पनि सेन्ट जेभियर्समा पढ्ने सपना छाडेँ।’सेन्ट जेभियर्सले पैसाका कारण नपत्याएका आशिक बिहीबार राति आएको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा उत्कृष्ट सावित भएका छन्।
सेन्ट जेभियर्सले नपढाउने भएपछि नजिकै रहेको त्रिपुरेश्वरमा रहेको सामुदायिक स्कुल विश्व निकेतनमा भर्ना भएका थिए। प्लस टु सामुदायिक स्कुलबाटै पढेर एमबीबीएस उत्कृष्ट सावित भएपछि आशिकको खुशीको सीमा छैन। ‘आफ्नो कलेज, आफ्नो ठाउँ, परिवारका लागि केही गर्न सके भन्ने भएको छ,’
उनी भन्छन्, ‘यसपछि पनि यसमा केही राम्रो गर्ने र आफ्ना जुनियरहरूलाई पनि केही सिकाउने इच्छा छ।’ ‘२०० नम्बर ल्याउने गरी तयारी गरेको थिएँ’२०० नम्बरको प्रवेश परीक्षामा उनले १८६ नम्बर ल्याएका छन्। दोस्रो नम्बरका अमृत ज्ञवालीको उनीभन्दा ३ अंक कम छ।
आशिकले पहिलो प्रयासमै एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा टप गरेका हुन्। ‘एक नम्बरमा नाम निकाल्छु, निकाल्दिनँ, त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा चलेन,’ तयारीबारे उनले भने, ‘सकेसम्म राम्रो गर्छु, दुई सयमा दुई सय ल्याउँछु भनेर तयारी गरेको थिएँ। मेरै केही कमजोरीका कारण दुई सयबाट १४ अंकले पछि परेँ।’
एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका लागि उनको तयारी गत वर्ष भएको पहिलो लकडाउनबाट सुरु भएको हो। उनले कहिल्यै रुटिन बनाएनन्। ९–१० कक्षामा हुँदा बनाउँथे। तर कहिल्यै फलो भएन। उनी दिनको यति नै घण्टा पढ्छु भनेर टुंगो नभएको बताउँछन्। कहिले एक त कहिले घण्टौँ किताबमा घोत्लिएर बस्ने गरेको अनुभव उनीसँग छ।
‘म के गर्दैछु भन्ने कुरा आफूलाई सुरुमा महसुस हुनुपर्छ। मैले गर्नुपर्छ भन्ने फिल नभएसम्म केही कुरा पनि हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो पाठ्यपुस्तक पढ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। प्रश्न त्यहीबाट आउने हो। त्यो पढियो भने राम्रो पक्कै आउँछ।’
उनले दैनिक दोहोर्‍याएर पढ्नुपर्ने सुझाए। ‘दैनिक दोहोर्याएर पढ्नुपर्छ। सकेसम्म सरले पढाउनुभन्दा अगाडि नै पढेर गयो भने अझै बुझिन्छ,’ उनले तयारीबारे थपे, ‘‘सबै प्वाइन्ट्सलाई हाइलाइट्स गर्दै त्यसलाई आफूले बुझ्ने गरी नोट बनाएर पढ्थेँ। दोहोर्याउनु एकदमै महत्वपूर्ण छ।’
अहिले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकाले धेरै क्षति पुगेको उनको अनुभव छ। दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त चिकित्सक भएको भए कोरोनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा उनी विश्वस्त छन्। ‘पर्याप्त र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति भएको भए को’रोनाको रोकथाम र उपचार अझै व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो’,
उनी आफू डाक्टर बन्न चाहनुको कारण भन्छन्, ‘थुप्रै मान्छेको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।’ एमबीबीएसपछि कुन विशेषज्ञता हासिल गर्ने सोचेका छैनन्। तर कम्तीमा दुई तीन विषयमा एमडी गर्ने उनको लक्ष्य छ।
Prevको-रोनाको त्रा`समा खुशिको खबर, भाइरस नियन्त्रण हुने आधार यसरी बन्दै हेर्नुहोस् ! सक्दो सेयर गरि जानकारी बाढौँ !
Nextबेला-बेला गर्भाशयमा जलन भएको महशुस हुन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो खतरा